Fanafihana nahafaty ny Mompera Jiva Lucien : 13 nosamborina tany Antsohihy | NewsMada
Fanafihana nahafaty ny Mompera Jiva Lucien : 13 nosamborina tany Antsohihy
Hatramin’ny omaly, olona 13 no nosamborina hanaovana fanadihadiana, mikasika ilay fanafihana mitam-piadiana tao amin’ny tobin’ny Frera Capusins, Antsohihy, ka nahalavo ny Mompera Jiva Lucien sy naharatrana ny frera Jeremy. Maneho ny alahelony amin’ireo fanafihana sy herisetra, tato ho ato, atao aminy ny Katolika.
Mangataka amin’ny fanjakana ny fiangonana katolika mba handray andraikitra avy hatrany manoloana ny zava-misy mahazo azy ireo, toy ity tranga farany, nahafaty ny mompera Jiva Lucien sy nandratra frera tany Antsohihy. Nilaza ny mompera Randriamahefa François de Paul, tompon’andraikitra ny fanabeazana frera ”capucins” Antananarivo, fa toy ny fanimbazimbana ny zava-masina mihitsy izao, ny famonoana mopera, ny fametavetana relijiozy, ny fangalarana lakolosy. «Toy ny karazana fanafihana manokana ny katolika mihitsy ny fahitana azy », hoy ity mompera ity. Fanintelony ny fanafihana nitranga nahazo ny katolika, toy ny tany Toliara izay namoizana aina ihany koa, ny tany Andranomanelatra Antsirabe, ilay nanolanana relijiozy ary ity farany tany Antsohihy ity.
Ho an-dry zareo katolika, toy ny efa misy andian’olona na tambajotra mihitsy manafika azy ireo na koa amin’ireo finoana hafa.
13 lahy no efa nosamborin’ny zandary omaly manodidina ity raharaha ity, izay voalaza fa misy ifandraisana mivantana tamin’ny fanafihana. Hanaovana fanadihadiana izy ireo.
Nilaza ny frera tompon’andraikitry ny fanabeazana tany Antsohihy, fa efa intelo no nikasa hangalatra ny lakolosim-piangonana ireo jiolahy fa tsy nahazo izany. « Tsy haka ilay lakolosy mihitsy no nalehan’ireo olon-dratsy fa hanafika sy hamono. Nanohitra ry mompera ary nifanao totohondry mihitsy ary izao notifirin’ny jiolahy izao », hoy ny fanamafisana. Frera 10 no tao amin’ity toeram-ponenan’ny mompera sy frera « capucins » ity. Niaro azy ireo ny momspera Jiva Lucien, toy izao koa ilay frera Jeremy saingy tsy nahatohitra ireo mpanafika.
Bala maromaro sarona
Nilaza ny jeneraly Rakotoarison Anthony, tompon’andraikitry ny angom-baovao eo anivon’ny zandarimaria fa efa mandray andraikitra ny zandary avy any Mahajanga, ary efa any Antsohihy. Misy amin’ireo olona voasambotra ireo no misy ifandraisany mivantana amin’ireo nanafika. Bala maromaro Kalachnikov sy “chevrotine” maromaro sarona, an’ireo jiolahy tavela nandritra ny fitsoahany. Nisy kapa sy satroka taraiky ihany koa.
Nilaza ny zandary fa tsy marina ny fisian’ny tambajotra mpanafika toeram-pivavahana na finoana. Nambaran’ireo ihany fa efa misy kosa ny fiaraha-miasa amin’ny karazam-pinoana amin’ny fomba hiarovana azy ireo. “Misy ny paikady apetraka ahafahana miara-miasa akaiky amin’izy ireny, ary tsy anavahana finoana”, hoy ny Jly Anthony.
Miandry izay vokatry ny fanadihadiana ny rehetra andanin’izany, ary mihevitra fa tsy hisy intsony ny karazana fanafihana mahazo ny mpitondra fivavahana tahaka ny tany Antsirabe sy ity tany Antsohihy ity. Endriky ny tsy fandriampahalemana na aiza na aiza.
Teraka tamin’ny 25 avrily 1974 i Mompera Jiva Lucien. Ny 3 oktobra 1997 izy no nandray ny akanjo maha « Novice ». Nanao voady voalohany tamin’ny 4 oktobra 1998 ary voady mandrakizay tamin’ny 5 jona ny 2005. Nohamasinina ho pretra tamin’ny 21 septambra 2008, ary izao nindaosin’ny fahafatesana ny 23 avrily 2017 tamin’ny fomba feno habibiana izao. Andrasana ao amin’ny Chapelle Saint François d’Assise Ambendrana kosa ny nofomangatsiakan’i Mompera Jiva Lucien. Aorian’ny Sorona Masina fanaovam-beloma ny alarobia 26 avrily 2017 ny fandevenana ao amin’ny fasan’ny Frères Mineurs Capucins Ambendrana Antsohihy izay toerana iandrasany ny fitsanganan-kovelona eo ankavan’Andriamanitra.
Efa any Antsohihy ihany koa ny praiminisitra sy ny minisitry ny filaminana anatiny, ny minisitry ny asa vaveventy aty ny minisitry ny fitsarana, mijery akaiky ny zava-misy.